192.168.1.254 အဒ်မင်ဝင်မည် | router အဒ်မင်ဝင်မည် & လျှို့ဝှတ်နံပါတ်အားမူလအတိုင်းပြန်လုပ်သည်
router ဝင်မည်, reset, Password ကို, IP Address ကိုအသေးစိတ်
ဇန္နဝါရီလ 23, 2019 http192168111com
192.168.1.254 routers နှင့် modems ၏ပဒေသာများအတွက်ပုံမှန် Router ရဲ့ IP လိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုပုဂ္ဂလိကအိုင်ပီလိပ်စာဖြစ်ပါသည်. 192.168.1.254 လော့ဂ်အင် အဆိုပါ admin ရဲ့ access ကိုရခွင့်ပြု, settings တွေကို configure နှင့်ကို update. အဆိုပါအိုင်ပီ 192.168.1.254 ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်များနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်းမှ reserved ဖြစ်ပါတယ်.
192.168.1.254 IP Address ကိုအဒ်မင်ဝင်မည်သင့်ရဲ့ ADSL Router ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားခွင့်ပြု. အသုံးပြုသူတစ်ဦးဝါယာကြိုးမသုံးဘဲသင့် router ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အကယ်., IP address ကိုကုဒ် 192.168.1.254 ဖြစ်နိုင်စေသည်.
192.168.1.254 router သည်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကအိုင်ပီဖြစ်ပါသည်, modems, နှင့် broadband ကရိုးရိုးဒီပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်ကိုသို့မဟုတ် IP အတွင်း device ကိုဒီပုဂ္ဂလိက IP ကိုအသုံးပြုပြီးအင်တာနက်ကနေတိုက်ရိုက်မဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်ဒေသခံကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မည်သည့်အခြားကိရိယာတစ်ခုကို network ပေါ်မှာလည်းမဆိုအခြားကိရိယာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်.
Linksys router များနှင့် modem အပါအဝင်အချို့သော routers နှင့် modem အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်, Westell DSL modems, Alcatel modem, 3com router များ, နှင့် modem, ဘီလီယံကို router များနှင့် modem နှင့်တခြားအမှတ်တံဆိပ် router များအရာများသောအားဖြင့်အသုံးပြုမှု 192.168.1.254 router သည်များအတွက် default အနေနဲ့ IP လိပ်စာအဖြစ်.
သို့ Log 192.168.1.254 IP Address ကို
အသုံးပြုသူတစ်ဦးရိုးရှင်းစွာပြီးပြည့်စုံနိုင် 192.168.1.254 အောက်ပါအဆင့်များကဝင်မည်ခြေလှမ်း.
လှမ်း: 1- သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ်ကိရိယာ Ethernet cable ကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုအားဖြင့် router ကို network ကိုချိတ်ဆက်ရန်.
လှမ်း: 2- သင့်ရဲ့ PC ကိုအတွက် browser များမဆိုဖွင့်ပါနှင့် URL ကိုရိုက်ထည့် http://192.168.l.254 သင့် browser အတွက်.
လှမ်း: 3- မှန်ကန်စွာကို default Router က username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် အကယ်. router ရဲ့ IP address ကိုပေါ်ပါလိမ့်မည် 192.168.1.254.
၏က default IP Address ကိုအတူအများစုမှာ router များ 192.168.1.254 အဆိုပါ username နှင့် password တစ်ခုကိုသုံးရန် “admin ရဲ့“. သင်သည်သင်၏ router ကို username နှင့် password ကိုမေ့ရင်တောင်ပြီးနောက်သင်၏အကူအညီယူနိုင်ပါသည် 192.168.1.254 Login နှင့် Router ကို reset နိုင်ပါတယ်.
ငါသည်ငါ့ Password ကိုမေ့လျော့နေလျှင်အဘယ်အရာကို?
အဆင့်-1: ချွတ် Switch သို့မဟုတ်သင်သုံးနေသည့် Router ကိုပိတ်ထားပါ.
အဆင့်-2: စာနယ်ဇင်းနှင့်များအတွက်နောက်ဘက် panel ကိုအပေါ်ပြန်ညှိမှုခလုတ်ကိုကိုင်ထား5သို့ 10 သို့မဟုတ် 15 စက္ကန့်မယ့်ထိပ်တန်းချွန် pin ကိုအတူတစ်ခုသို့မဟုတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးထိုးအပ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းစတင်မှုမှာဒါမှမဟုတ် Router ကိုဖွင့်.
လှမ်း- 3: ယခု, ယင်းသို့ button ကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့် device ကို reboot ဘို့စောင့်ဆိုင်း.
လှမ်း 4: ယခု, သငျသညျ Ethernet ကွန်ယက်ကို cable ကိုသို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက် အသုံးပြု. မှတဆင့်သင့် router ရန်သင့် device ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
လှမ်း 5: ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်သင့် router ကိုယခု reset ဖြစ်ပါတယ်.
ငါသည်ဤ post ကိုသငျသညျအပြည့်အကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ် 192.168.1.254 လော့ဂ်အင် ခြေလှမ်းများနှင့်ပြည့်စုံသည့် 192.168.1.254 အဒ်မင်ဝင်မည် လှမ်း. သင်ဆဲမဆိုဒုက္ခသို့မဟုတ်အခက်အခဲများရှိပါကထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေး. ပိုပြီးအကြောင်းကိုများအတွက် 192.168.1.254 IP Address ကို, အခုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်.
192.168.1.254 စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်192.168.1.254 လျှို့ဝှတ်နံပါတ်အားမူလအတိုင်းပြန်လုပ်သည်https://192.168.1.254 လော့ဂ်အင်
ယခင် Post မှ:Linksys Router ဝင်မည် & Linksys Router Configuration ကိုလမ်းညွှန်
သင်၏အကြိုက်များနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါလည်ပတ်မှုများအားသတိရခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုသည်. “ Accept” ကိုနှိပ်ပါ။, သင်သည် cookies များအားလုံးကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်.
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကွတ်ကီးများသည်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ဤအမျိုးအစားတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကိုသေချာစေသည့် cookies များပါ ၀ င်သည်. ဤ cookies များသည်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမျှသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ.
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှတစ်ဆင့်စုဆောင်းရန်အထူးအသုံးပြုသည်, ကြော်ငြာ, အခြား embedded contents တွေကိုမလိုအပ်သော cookies များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်. သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဤ cookies များကိုမသုံးမီအသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်.